Wasiir xilkii uu ka xayuubiyey Aabihiis - iftineducation.com
Wasiir xilkii uu ka xayuubiyey Aabihiis
aadan21 / December 31, 2016
iftineducation.com – Wasiirka gobolka Uttar Pradesh,oo ah gobolka ugu dadka badan wadanka Hindiya ayaa waxaa xisbigii uu ka tirsanaa ka eryay Aabihi
Wasiirka oo lagu magacaabo Akhilesh Yadav ayaa waxaa xilkii ka xayuubiyey “si loo badbaadiyo xisbiga” Samajwadi Party (SP) hogaamiye Mulayam Singh Yadavs oo ah Aabihiis sida ay sheegtay warbaahinta Hindiya.
Madaxa xisbiga SP ayaa sheegay in xisbigu uu go’aansan doono wasiir goboleedka xigga ee baddalaya wasiirkan shaqadda laga eryay.
Doorashooyinka ayaa la filaya in looga dhawaaqo gobolka Uttar Pradesh maalmaha soo socda.
Talaabaada uu qaaday Mulayam ee xisbiga uu uga saaray wiilkiisa ayaa ka dambeysay ka dib markii wiilkiisu uu baahiyey magacyada 235 musharaxiinta doorashooyinka soo socda, inkastoo xisbigu goor horaba uu ku dhawaaqay xubnihiisa. Liiskaas ayaa waxaa ka mid ahaa taageerayaasha Akhilesh, waxaana uu ka saaray xubno daacad u ah Aabihiis.
Xilka xayuubinta ayaa waxay taagnaan doontaa mudo lix sano ah, taasi oo macnaheedu yahay in Yadev aannu wax shaqo ah ka qaban doonin . Waxaa sidoo kale xisbiga laga eryay ina adeerkiis Ramgopal Yadav oo xisbiga ka ahaa masuul sare.
Carada xisbiga ee ku aadan wasiirka ayaa timid ka dib markii uu ku dhawaaqay shir deg deg ah oo xisbiga SP isagu yimaado 1-da bisha January, laakiin Mulayam wuxuu sheegay in isagu uu yahay kan u leh awood in sidaa uu ku dhawaaqo.
“Wasiir Akhilesh Yadav ma fahmayo in Ramgopal uu isku dayayo in uu bohol ka tuurayo” Mulayam ayaa sidaa ka sheegay shir saxafaafeed oo uu ku qabtay magaalada caasimadda u ah gobolka ee Lucknow.
Waxaa jira in ka badan 20 xubnood oo ka mid ah qoyska Yadav oo si firfircoon ugu jira siyaasadda Hindiya, waxaa ka dhaxeeya xiisad qaraar oo mudo soo jiitamaysay taas oo keentay dagaal iyo kooxaysi ka dhex dhaco xisbiga SP gudihiisa. Ma cada in Akhilesh xoog looga qaaday xilkiisa.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegay in wiilku waa [Wasiirkee] ka caansanyahay Aabihiis isagoo ka gaari kara meel fog xudduudaha sida wayn uga dhex jira siyaasiyiinta waqooyiga Hindiya.
gabarta lugaha isku xoqda markey kacsato oo….